नेपालकै कान्छा सिडिओ सुरेश सुनार….
२०७७ मंसिर २७ सुर्खेत । वि.सं २०६३ मा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका सुरेश सुनार त्यो बेलाकै सबै भन्दा कम उमेरमा सिडिओ बनेका सुनार चर्चित राष्ट्र सेवकको रुपमा परिचित छन् । लामो समय देखि विभिन्न पदमा रही काम गरेको वर्षौबर्षको अनुभव छ । सुनार हाल डोल्पा जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी छन् । उनै प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुनार सँग, ‘उनको बाल्यकाल, जीवन भोगाई संघर्षको सेरोफेरोमारही” संचार क्लव डटकमका संवाददाता तिलकराज विकले गरेको कुराकानीको संम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत छ ।
उनको बाल्यकाल र सुन्दरतताको चर्चा गरौं । बुवा केशव सुनार र आमा जया सुनारको कोखबाट वि.सं २०४५ साल असार २० गते रुकुम जिल्लाको विजयश्वरी गाविस वडा नं ४ स्थीत मामाको घरमा सुनारको जन्म भएको हो । उनको स्थायी ठेगाना भने खलंगा गाविस वडा नं ६ रिसाङ र हालको भेरी नगरपालिका ४ खलंगा जाजरकोटमा हो । उनको जन्म एक सामान्य दलित परिवारमा भएको थियो ।
उनका बुवा खेती किसानी गर्थे । आमा घरको काम र छोराछोरीको हेरचाहमा समय बिताउथीन् । बुवाको रोजगारी केही थिएन् । काम गरेरै छोराछोरीलाई हुर्काउनु पथ्र्यो । उनका तीन भाईबहिनी हुन् । सुनार जेठो सन्तानको रुपमा जन्मेका थिए । घरमा खेतीकिसानी गरे खाना पुग्ने,‘नत्र आयआर्जन केही पनि थिएन् । त्यसमा पनि सहजै बिते दिनहरु,‘बाल्य अवस्था बढ्दै गर्दा, शैक्षिक रुपमा चेतना भएको उनको मामाको घरबाट पनि भान्जलाई पढाउनु पर्छ” भन्ने सोच थियो । सुनारका बुवामा पनि आफु दुःख गरेर भएपनि सन्तानलाई शिक्षादिक्षा दिनुपर्छ, भन्ने मान्यता हो ।
स्वयम उनीमा पनि पढ्न रहर उस्तै थियो । जाजरकोट त्रिभुवन निम्न माध्यामिक विद्यालय रिसाङमा सुनार एक कक्षामा भर्ना भए । उनी विद्यालयमा ईमान्दार,अनुशासित, मेहनती, विद्यार्थी थिए । कक्षाका मध्यम वर्गका विद्यार्थीमा पर्थे । कक्षा एक–देखि आठ कक्षा सम्म त्यही विद्यालयमा अध्ययन गरे । त्यसपछि, कक्षा ९ देखि १० सम्म सदरमुकाम खलंगा स्थीत (थाप्लेचौर) त्रिभुवन उच्च माध्यामिक विद्यालमा अध्ययन गरे । २०६० सालमा त्यही स्कुलबाट एसएलसी पास भए । उनका बुवाको सपना छोरोलाई इन्जिनीयर बनाउने थियो । इन्जिनीयर पढाउनका लागी स्थानीय साहुकाँह एक लाख रुपैयाँ बुवाले ऋण निकाले । ‘तर सुनारले सोचे म यति लगानी गरेको पैसामा पढे भने, म भन्दा पछाडि जन्मिएका भाईबहिनीहरु कसरी पढ्लानत,भन्ने सोचे ।
म अव लोकसेवा तयारी गरेर खरिदार सुब्बा समेत जसरीनि खान्छु, भन्ने हिम्मत बढ्यो । त्यसपछि, सुनारले उच्च माध्यामिक तहको पढाई कक्षा एघारमा भेरी ज्ञानोदय क्यामपस जाजरकोटमा भर्ना गरे । त्यहाँ फाम लगाए पनि,उनी पढन बहुमुखी क्यामपस सुर्खेत आए । उच्च स्तरको शिक्षा र स्नातकोत्तर पढाई सुर्खेत बहुमुखी क्यामपस बाटनै उत्तिर्ण गरे ।
र त्यसपछि, त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट प्रायबेट साथसाथै जहाँ बस्यो त्यही बाट स्नाकोक्तर पढाई गरे । सरकारी सेवामा छिर्नु पर्छ भन्ने सोच थियो । उनी भन्छन् घरको परिवार आमा बुवा मेरो पढाईमा चासो राख्नुहुन्थ्यो । दलित समुदायबाट म सरकारी सेवामा प्रवेशमा पनि मेरो पहिलो चुनौति थियो । भने जस्तो समाज थिएन् । विभेद हुन्थ्यो । उनले भने, सपना ठुलो देखेको थिए । म लोकसेवा पास गर्छु । तर २०६३ र ६४ सालमा लोकसेवा बन्द थियो । उनले अध्ययन गर्न भने छोडेनन् २०६३ सालमा तत्कालीन घरेलु विकास समीति सुर्खेतबाट मुखिया वा उपसायक सरहको अस्थाई पदको लागि आवेदन माग भयो । सुनारले आवेदन दिए । नाम पनि निस्कीयो ।
उनको पहिलो सिफारीस रोल्पा जिल्लामा भयो । उनी मात्र १७ वर्षका थिए । हेर्दा कलिलो र सानै उमेरको देखिन्थे । सेवा लिन आउने मानिसहरुले पहिले पहिले त विश्वास नै गर्न गाह्रो भयो । त्यतिबेला उनको पहिलो तलव ३८ सय रुपैयाँ कामाउन्थे । ईमान्दारीता र मेहनतका साथ काम गरे । उनले काम गर्देगर्दा प्रशासनीक भुमिका निभाउथे । त्यसमा कुनै दुःख कष्टहरु भोग्न परेन् । सुनारलाई त्यहाँ पढ्ने राम्रो वाताबरण तय भयो । उनको बसाई सुखद रहयो । किनकी उनलाई निरन्तर पढाई र स्थाई जागिर खाने मनमा ठुलो धोको थियो । २०६५ सालमा लोकसेवा आयोगबाट नायव सुब्बा पास गरे । त्यो मनको धोको पुरा पनि गरेरै छोडे । उनको स्थाई जागिरको पहिलो पोष्टिङ जाजरकोट टालेगाँउ गाँउविकास समीतिको सचिव पदमा नियुक्ति भए । मात्र उनको तीन महिना त्यहाँ काम र बसाई रहयो । त्यसपछि, क्षेत्रिय सिंचाई निर्देशनालय सुर्खेतमा सरुवा भयो ।
अननःत उनको २०६८ सालमा स्नातकोत्तर स्तरको पढाइ सकियो । त्यही ६८ सालको मंसिर महिनामा नेपाल सरकारको अफिसरको लागि आवेदन दिए । नाम निस्कीयो उनी अफिसर बने । मनले सोचे जस्तो भयो खुशि व्यक्त गरे । सुनार मुस्कुराउदै भन्थे म आफु सफल भएको अनुभुति भयो । ६७ सालमा सामान्य प्रशासन सेवा नेपाल समुहको शाखा अधिकृत पदमा नियुक्ति भयो ।
सुनारको विवाह कसरी भयो त ?
नियुक्तिका साथसाथै सुनारले विवाहको क्रम पनि जारी नै थियो । सुर्खेतमा बसेर पढाईको तयारी गर्दा एक युवतीसँग चिन्जान भयो । उनले भने,‘हाम्रो माया प्रेम बस्यो । उनीहरुको विवाहमा बाधिन त्यति सजिलो भने थिएन् । किनकी अन्तरजातिय प्रेम भएकोले, युवतीको थर बस्नेत उनको सुनार थियो । मन मिल्यो इच्छा लाग्यो, तर विवाह बन्धनमा बाँधिए । मनमा शंका थियो,भोली समस्या हुन्छ कि ? तर शिक्षित परिवारका कारण दुवै पक्षले सहजै स्वाईकार गरे । अहिले सम्बन्ध राम्रो छ । सुनारको दुई बहिनी छोरीहरु छन् ।
उनको सरुवा हुने क्रम जारी नै थियो । जाजरकोट माालपोत कार्यालयमा काम गरे । त्यसपछि, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सुर्खेतमा सरुवा भयो । केही समय बस्ने मौका मिल्यो । केही समय पछि त्यतिबेलाको स्थानीय निकाय अन्तर्गतको सार्वश्रीताराताल नगरपालिका बर्दियामा सिफारिस भए, काम गरे । करिव एकडेढ वर्ष त्यहाँ बित्यो । सुनारको त्यसपछिको यात्रा स्थानीय निकाय विद्याआयोग काठमाडौंमा सरुवा भयो । त्यहाँ पनि राम्रै बसाई रहयो । २०७४ सालको चुनावमा फेरी उनको सरुवा ठाकुरबाबा नगरपालिका बर्दियामा भयो ।
निवार्चन भयो,जनप्रतिनिधीहरु आए । केही समय त्यतै काम गरे । ७४ सालको कार्तिक महिनामा फेरी काठमाडौं सरुवा भयो । संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा पुगे । कामका साथसाथै पढाईलाई पनि नियमीत समय मिलाएर पढ्ने गर्थे । सुनारले त्यसछि उपसचिवको परिक्षा दिए । नाम निस्कीयो । उनको सिफारीस वन तथा वाताबरण मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन शाखामा सिफारीस भयो । त्यहाँ पनि सुनारको मेहनत र ईमान्दारीता राम्रो थियो । उनको पुन पहिलो पटक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदमा घोडाघोडी नगरपालिका कैलालीमामा पोष्टिङ भयो । तर धेरै समय वितेको थिएन् । मात्र एक महिना पछि गृहमन्त्रालय अन्तर्गत सरुवा भयो ।
उनलाई बाँके जिल्लाको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा सिफारिस गरियो । त्यहाँको प्रशासनीक भुमिकामा रहेर काम गरे । सुनार पुन पहिलो पटक बझाङ जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा नियुक्ति भए । बझाङमा सिडिओ भएको बेला सुनार निकै चर्चामा थिए । चर्चाको प्रमुख कारण थियो, बझा¬ङमा भएको डोजर आतंक समेत बन्द गराए । उनी भन्छन् मनपरी ढङगमा काम गरिदै थियो । अहिलेको परिस्थितीमा सबै भन्दा बढि विपदका घटनाहरु देखिन्छन् । जनप्रतिनिधी र इन्जिनियरको काम्जोरीका कारण सडक दुर्घटनाहरु दिनानु दिन निम्ती रहेका छन् । सिडिओ सुनार भन्छन् । ‘यो र यस्ता कुराहरुलाई रोक्नको लागि साथ दिदा जनप्रतिनिधीहरु सँग हातेमालो गर्न खोज्दा असहज रुपमा लगियो । बझाङको बसाई राम्रै भयो । बझाङमा उनको विदाईको बेला त्यहाँका स्थानीले फुलमाला चडाएर विदाई गरे । उनी सम्झनछन् त्यहाँ भन्दा अगाडि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा हुदा यतिका जनमानिसहरुको उपस्थिती पहिलो चोटी भएको थियो । जनता भने उनले गरेको कामप्रति खुशि थिए, जनप्रतिनिधी भने आफ्नो रोजी रोटी बन्द गरेकोमा सुनार प्रति आक्रोस भई उनलाई सरुवा गराउन समेत लागि परे । कामको विषयमा सिक्ने र सिकाउने मौका पाए । त्यतिखेर चर्चा अंबलनै थियो ।
त्यसपछि, सिडिओ सुनारको सरुवा मोराङ जिल्लामा सायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रुपमा भयो । त्यहाको बसाई काम कार्य राम्रै रहयो । हाल २०७६ माघ २६ गतेका दिन डोल्पा जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा नियुक्ति भए । सिडिओ सुनार नेपालकै कान्छो सिडिओेको लोकप्रिय नाममा चिनिन्छ । सामान्यतया सिडिओ हुदा यस्तो हुन्छ । तर उनी त्यस्ता छैनन् । उनी झट हेर्दा सिडिओ जस्तौ देखिन्छन् । सुनार जो कोही सँग पनि घुल्मिल हुन्छन् । मिठो बोल्छन् सरल स्वभावका छन् । उनको सबैले प्रशंसा गर्ने गर्छन् ।
सुनार २९ वर्षको उमेरममा नै सिडिओ बने । उनी भन्छन् । मलाई राज्यले जिम्मेवारी दियो । अहिलेको अवस्थामा युवाले जिम्मेवारी पाऊनु परिर्वतनको कुरा हो । समाजले सकारात्मक रुपमा बुज्न जरुरी छ । महत्वपुर्ण जिम्मेवारीमा गएपछि, आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दारिताका साथ निभाउने छु । त्यसैले होला, सुनारलाई अहिले आफ्नो समुदायको मानिसहरुले गर्वका साथ हेर्ने गर्छन् । जता गएपनि चर्चाको शिखरमा रहेको देखिन्छ ।
जहाँ भएपनि शान्ति सुरक्षा ईमान्दारीताका साथ काम गर्ने हो । आफ्नो जिम्मेवारी सबैले पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले राजनीतिमा होस या प्रशासनिक क्षेत्रमा अनुशासन र इमान्दारीता मिसन र भिजनको ठुलो खाँचो छ । यो सबैले बुझ्न आवश्यक छ । भ्रष्टाचार, अनियमतता मौलाएको मैले पनि महशुस गरेको छु । कानूनको अक्षर पालना गर्नुपर्ने अवस्था हो । यो, तर कहिकतै हामी चुकिरहेका छौ, ‘कि भन्ने लाग्छ, उनले भने । तर अनुशासनहिनता र भ्रष्टाचार बढेको देख्छु । ‘आफ्नो मेहनत, संघर्षले यहाँ सम्म आए । लोप्रियता कमाएको छु । कामप्रति सधै प्रतिवद्ध छु, । मेहनत नै ठुलो कुरा हो । शान्ति सुरक्षा कायमका निम्ती सधैव लागि परेको छु,भन्छन् सिडिओ सुनार ।